के निमोनिया संक्रामक हो? को जोखिममा छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस औषधि बनाम मित्र कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> के निमोनिया संक्रामक हो?
के निमोनिया संक्रामक हो?
निमोनिया एक संक्रमण हो जसले फोक्सोलाई असर गर्दछ। निमोनिया संक्रमित व्यक्तिलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ किनकि फोक्सोमा वायु थैली, जसलाई एल्भियोली पनि भनिन्छ, तरल पदार्थले भरिन थाल्छ। निमोनिया जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। अमेरिकामा हरेक वर्ष यस रोगबाट लगभग ,000०,००० मानिस मर्दछन् रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC)। कुनै प्रकारको श्वासप्रश्वासको स concerning्क्रमण हुन सक्छ विशेष गरी कोरोनाभाइरसको खतराबाट। तर के निमोनिया संक्रामक हो? निमोनिया स for्क्रमित हुने जोखिममा को छ र यो कसरी फैलिनबाट बचाउने भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
मलाई कसरी निमोनिया छ भनेर म कसरी थाहा पाउने?
निमोनियाका लक्षणहरू संक्रमण पछि २ hours घण्टा भित्र देखा पर्न सक्छ वा बिस्तारै आउन सक्छ। निमोनियाका सामान्य लक्षणहरू कहिलेकाँही चिसो वा फ्लूजस्ता लक्षणहरू जस्तै खाँसी, ज्वरो, र सास फेर्न समस्याहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ।
खोकी आफैँ भिजेको वा उत्पादक हुनसक्दछ, यसको अर्थ तपाईले फोहरबाट पहेँलो, हरियो वा भूरे रंगको बलगम खान्नुहुन्छ। हीमोप्टिसिस (रगत, रक्तरंजित बलगम, वा कफलाई खोकी) र राति खोकी निमोनियाको मुक्कामा पनि हुन सक्छ।
एक उच्च ज्वरो , १० degrees डिग्रीभन्दा माथिको, शरीरलाई निमोनियासँग सम्बन्धित संक्रमणसँग लड्ने प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यदि तपाईं ज्वरोमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले चिसो, पसिना र थरथर काँप्न सक्नुहुन्छ।
सास फेर्न गाह्रो छ सास फेर्न गाह्रो लाग्न सक्छ, वा सास फेर्न नसक्ने जस्तो लाग्न सक्छ। खोक्दा वा लामो सास फेर्न प्रयास गर्दा तीखा वा छुराउने भावनासहित छाती दुखाइ एकपटक निमोनिया हुने बित्तिकै सामान्य हुन्छ। यसबाहेक, साइनोसिस (रगतमा कम अक्सिजन) देखा पर्न सक्छ, अक्सिजनको कमीबाट तपाईंको ओठ, औंलापट्टी वा छाला निलो बन्छ।
निमोनियाका थप लक्षणहरूमा भोक कम हुनु, पखाला, मतली, र बान्ता समावेश हुन सक्छ।
निमोनियाका 30० भन्दा बढी कारणहरू छन्। इन्फ्लुएन्जा र श्वासप्रश्वास सिन्सिटाल भाइरस (आरएसभी) संयुक्त राज्य अमेरिकामा निमोनियाको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू हुन्, CDC । निमोनियाको ब्याक्टेरिया र भाइरल फार्म संक्रामक हुन्छन्। यद्यपि रासायनिक इरिडन्ट्स, फgi्गी वा आकांक्षा निमोनिया (खाका वा तरल पदार्थको इनहेलिंग) को कारणले गर्दा निमोनिया संक्रामक छैन।
निमोनियाका संक्रामक प्रकारहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा वायुजनित कणहरू मार्फत प्रसारित हुन्छन्। खोकीमा हावामा छिचोल्नुले अर्को व्यक्तिलाई सीधै दूषित गर्न सक्छ। को प्रसार को जस्तै साधारण चिसो, फ्लू, र COVID-19 , वायुजनित कणहरूले सतहमा अवतरण गर्न सक्दछ र अप्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई संक्रमित गर्दछ। पैदल न्यूमोनिया हल्का निमोनिया वर्णन गर्ने अर्को तरिका हो जुन छाती चिसो महसुस हुन्छ। यदि तपाईं संक्रमित हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईं एसिम्प्टोमेटिक हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईं अझै पनि भाइरस वा ब्याक्टेरिया फैलाउन सक्नुहुन्छ जुन निमोनिया निम्त्याउन सक्छ।
केहि ब्याक्टेरियाहरू अरु भन्दा धेरै संक्रामक हुन्छन्। माईकोब्याक्टेरियम र माईकोप्लाज्मा कति सजिलै फैलाउन सकिन्छ भनेर जानिन्छ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कारणहरू धेरै जसो केसहरू जीवाणु निमोनिया को। यो श्वास रोग संक्रामक हो र सम्भवतः वृद्ध व्यक्ति र बिरामी प्रतिरक्षा प्रणालीको साथ व्यक्तिलाई असर गर्न सक्छ।
ब्याक्टेरियाले फोक्सोमा एउटा बाटो पत्ता लगाउन सक्छ र संक्रमणलाई निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी जो व्यक्तिहरू जो श्वासप्रश्वासकमा छन्, अन्य रोगबाट ग्रस्त छन्, वा अस्पतालमा भर्ती छन्। अस्पतालमा अधिग्रहित निमोनिया तब हुन्छ जब बिरामी परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा उपचार भइरहेको बेला निमोनिया हुन्छ।
सम्बन्धित: एफडीएले Xenleta लाई जीवाणु निमोनियाको उपचार गर्न अनुमोदन गर्‍यो
खोकी र बलगम को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो
भाइरल निमोनिया संक्रामक पनि हुन्छन्। इन्फ्लुएन्जा वा फ्लू वयस्कहरूमा भाइरल निमोनियाको सामान्य कारण हो। यद्यपि, श्वासप्रश्वास syncial भाइरस (RSV), कोरोनाभाइरस (COVID-१ many धेरै कोरोनाभाइरस मध्ये एक प्रकार मात्र हो), र सामान्य चिसो पनि निमोनिया निम्त्याउन सक्छ। फोक्सोमा तरल पदार्थ स collecting्कलन बाहेक, फोक्सोको टिशूहरू प्रायः न्यूमोनियसको साथ फुलेको र चिढचिलो हुन्छ।
निमोनियाको उच्च जोखिममा को छ?
निमोनियाका मामिलाहरू हल्कादेखि गम्भीर र जीवन-धम्कीसमेत हुन सक्छ, तपाईंको शारीरिक अवस्था र तपाईंको निमोनियाको प्रकारको आधारमा। जो कोही — जवान वा बुढो this ले यस सास फेर्ने अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। निम्न समूहहरू निमोनिया विकासको लागि अधिक संवेदनशील छन्:
व्यक्ति 65 65 बर्ष र माथिका
सीओपीडी वा दमको रूपमा हड्तालको हड्डीको शिकार बिमारीका बिरामीहरू
अन्तर्निहित स्वास्थ्य समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू जस्तै मुटु रोग वा एचआईभी / एड्स
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका ती, जस्तै केमोथेरापीमा लागेका बिरामीहरू, शल्यक्रियाबाट पुन: प्राप्ति, इम्युनोप्रप्रेसन्ट ड्रग्स लिन्छन्, वा भेंटिलेटरमा सास फेर्छन्।
समग्रमा नराम्रो स्वास्थ्यको साथ मानिस
व्यक्ति जो अत्यधिक मात्रामा रक्सी पिउँछन्
एक चिकित्सा पेशेवरले एक न्यूमोनियाको शारीरिक परीक्षण वा छाती एक्स-रेको साथ निदान गर्न सक्दछ औषधि लेख्नुहोस् आवश्यक रूपमा।
सामान्यतया, वयस्कहरू भन्दा बच्चाहरूलाई निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। निमोनिया विश्वमा बाल्यकालको मृत्युको पहिलो कारण हो। यद्यपि निमोनियाबाट बच्चाको मृत्यु दर अमेरिकामा उपलब्ध स्वास्थ्य देखभालका कारण उल्लेखनीय रूपमा कम छ, निमोनिया बच्चाहरूको अस्पतालमा भर्ना हुनुको पहिलो कारण हो अमेरिका मा। Years बर्ष र माथिका बच्चाहरू ठूलो बच्चाहरू भन्दा निमोनियाको लागि बढी जोखिममा छन्।
निमोनिया संक्रामक कति लामो हुन्छ?
औसत समय एक व्यक्ति निमोनियाबाट संक्रामक हो करीव १० दिन। यद्यपि निमोनियाका केहि केसहरू (विशेष गरी क्षयरोगसँग सम्बन्धित निमोनिया) धेरै हप्तासम्म संक्रामक हुन सक्छ, निमोनियाको रूप र सिफारिस गरिएको उपचार उपचारको प्रकारमा निर्भर रहन्छ।
एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरियल निमोनियाको संक्रामकता लाई घटाउन सक्छ। एन्टिबायोटिक सुरु गरेपछि, एक व्यक्ति अझै २ 24 देखि hours 48 घण्टा सम्म संक्रामक हुन्छ। एक पटक बिमारीसँग सम्बन्धित ज्वरो गएपछि निमोनिया संक्रामक हुने सम्भावना कम हुन्छ। प्रभावी उपचार पछि पनि ढिलो सूजनले गर्दा खोक्रा धेरै हप्तासम्म जारी रहन्छ।
घरेलु उपचारहरू जस्तै खान्कीलाई राहत दिन महको प्रयोग र जिंक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन, विशेष गरी भाइरल निमोनियाको अवस्थामा सहयोगी उपकरण हुन सक्छ Kate Tulenko , एमडी, कर्भस स्वास्थ्य को संस्थापक र सीईओ।
चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्दा रोगको अवधि र यसलाई अन्य व्यक्तिमा फैलाउने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंको ज्वरो फर्कन्छ वा यदि सुस्त लक्षणहरू विफल भए भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सल्लाहका लागि सोध्नुहोस्।
निमोनिया कसरी रोक्न सकिन्छ
केही निमोनिया रोकथाम योग्य हुन्छन्। खोपहरू केहि भाइरस र ब्याक्टेरियाका कारण निमोनिया रोक्न उपलब्ध छन्। साथै, सन्तुलित खाना खाएर र नियमित व्यायाम गरेर स्वस्थ जीवनशैली बिताउँदा निमोनिया हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। नियमित व्यायामले फोक्सोको स्वास्थ्य र संक्रमणहरूमा प्रतिरोध बढाउन सक्छ।
स्वस्थ जीवनशैलीमा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्नको लागि धुम्रपान र धेरै मदिरा सेवनबाट पनि परहेज हुनु समावेश छ। निमोनिया जस्ता रोगबाट बचाउनको लागि प्रशस्त आराम र पानी पिउने अर्को तरिका हो।
हात धुने अभ्यास गर्नाले तपाईंको जीवाणुहरूको जोखिमलाई पनि कम गर्न सक्दछ जुन निमोनिया निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी चिसो र फ्लूको मौसममा। यदि तपाईंलाई खोकी वा छींक छ भने, एक डिस्पोजेबल टिश्यू वा तपाईंको बाहुलाको कुहिनोमा पछ्याउन सक्दो गर्नुहोस्, त्यसपछि हात धुनुहोस्। निमोनिया निम्त्याउन सक्ने कीटाणुहरूको फैलावट रोक्नको लागि बारम्बार प्रयोग हुने सतहहरू जस्तै टेलिफोन, काउन्टरटप्स, र डोर्कनब्सलाई कीटाणुरहित गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
अन्तमा, यदि तपाईंको समुदायमा मानिस बिरामी छन्, अभ्यास गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहोस् सामाजिक दुरी जब सम्भव हुन्छ। ब्याक्टेरिया र भाइरसको तपाईंको एक्स्पोजर कम गर्दा स्वस्थ र सक्रिय जीवनशैली भलाईलाई भ्याएसम्म राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
कसरी सुरक्षित Cialis अनलाइन खरीद गर्न
बाँकी सर्वश्रेष्ठ: तपाईंको मनपर्ने फार्मेसी कथाहरू
कती समय लाग्छ यो xulane को लागी तपाइँको प्रणाली बाट बाहिर निस्कन को लागी
यदि म एन्टिबायोटिक को एक खुराक याद गर्छु
के गर्ने यदि तपाइँ एन्टिबायोटिक को एक खुराक याद छ
के thc को लागी एक गलत सकारात्मक औषधि परीक्षण को कारण हुन सक्छ